Soosaarka Shaqada Sare ee Shiinaha Profile Glass / U Warshadaha Nidaamka Glass Nidaamka iyo soosaarayaasha | Yongyu
Muraayadaha U profile ama galaaska loo yaqaan U channel galaas wuxuu ka yimid Austria. Waxaa sidoo kale lagu soo saaray Jarmalka in ka badan 35 sano. Sida mid ka mid ah agabka caadiga ah ee loo isticmaalo mashaariicda dhismaha-baaxadda weyn, dhalada U profile dhalada waxaa si ballaaran loogu dabaqayaa Yurub iyo Ameerika. Codsiga muraayadda U ee muraayadda u gaarka ah ee Shiinaha waxaa laga soo billaabey 1990-maadkii. Hadana aagag badan oo Shiinaha ah ayaa u adeegsada qaabkeeda qaab-dhismeedka caalamiga ah.
Muraayadaha U profile waa nooc ka mid ah muraayadaha wax lagu tuuro. Waa horumar laga sameeyay samaynta foornada kombuyuutarka ee gacanta lagu hayo ee u saamaxaysa inay ilaaliso tayo sare iyo saxnaan. Awoodeeda sare ee farsamada waxay u saamaxeysaa in lagu hagaajiyo dhismayaasha dhaadheer iyo dhismayaasha kale ee u baahan nal wanaagsan. Tanina waxay ka badbaadin kartaa dhismayaasha inay kor u kacaan tooska ah iyo kuwa taagan. Muraayadaha U profile-ka oo ay ka muuqato iftiinkeeda wanaagsan, kuleylka kuleylka ah iyo xafidida, xakamaynta dhawaaqa iyo ilaalinta codka --- waa mid ka mid ah noocyada cusub ee muraayadaha-bay'adda u roon iyo dhaqaalaha.
Iftiinka Maalintii: Wuxuu kala jajabiyaa iftiinka & yareynta iftiinka
Waxqabadka Heerrmaad: U-Qiimaha kaladuwan = 0.49 illaa 0.19
Fasaxyo Weyn: Darbiyada dhalada ee baaxadda aan xaddidnayn iyo dhirirkooda ilaa 12 mitir.
Elegance: geesaha galaaska-galaaska & Qulqulada masaska
Xarig la'aan: Looma baahna taageerid biraha toosan
Khafiifa: 7mm qaro weyn oo muuqaal ah oo muuqaal ah oo muuqaal ah ayaa fudud oo wax looga qaban karo
Ikhtiyaarada Aan Laxiririn: Rakibayaasha isticmaalaha
La waafajin karaa: Si iskumid la’aan ah loogu xirmo meelaha aragti ahaanta, beddelo burooyinka iyo diyaaradaha
Taxanaha K60 系列 K60Series
Quraaradda U prfole P23 / 60/7 P26 / 60/7 P33 / 60/7
Ballaca Wajiga (w) mm 232mm 262mm 331mm
Wajiyada Wejiga (w) inji 9-1 / 8 ″ 10-5 / 16 ″ 13-1 / 32 ″
Dhererka Flange (h) mm 60mm 60mm 60mm
Dhererka Flange (h) inji 2-3 / 8 ″ 2-3 / 8 ″ 2-3 / 8 ″
Dhumucda dhalada (t) mm 7mm 7mm 7mm
Qalabka dhumucda galaaska. inji .28 ″ .28 ″ .28 ″
Dhererka ugu badan （L) mm 7000 mm 7000 mm 7000 mm
Dhererka ugu badan （L) inji 276 ″ 276 ″ 276 ″
Miisaan (lakabka kaliya) KG / sq.m 25.43 24.5 23.43
Miisaan (lakabka kaliya) lbs / sq ft. 5.21 5.02 4.8
Textures galaas *
* Xusuusin: Cabirrada qaarkood iyo dareen-celinta ayaa laga yaabaa inay noqdaan xadidan wax-soo-saar waxayna ku xiran yihiin waqtiyada hogaan dheer. Mashaariicda waaweyn, waxaan ku faraxsanaan doonnaa inaan ka wada hadalno qaab dhismeedka iyo cabbirrada caadiga ah.
Tijaabad kuleylka & kuleylka kuleylka
Waxaan asal ahaan uga soo baxnay kuleylka loogu talagalay galaasyada muuqaalka U ilaa 20 ′ dherer ah iyo foornooyinka kuleylka kuleylka ah ee caadada u gaar ah oo loogu talagalay kuleylka saddex geesoodka U profile galalka. Mashiinadooda, nidaamyadooda, iyo waaya-aragnimadooda waxay soo saaraan dhalo cabbir ahaan cabbirkoodu dhan yahay.
Muraayada 'LABER UAB' ee kuleylka ah waa muraayad kaamil ah oo marin-habaabin ah oo lagu daaweynayay kuleylka labaad ee foornada si loogu xoojiyo dhalada oo kor loogu qaado cadaadiska ah 10,000 psi ama ka weyn. Muraayada U kulul ee heerkulkeedu yahay saddex ilaa afar jeer ayaa ka xoog badan muraayadda qulqulka qalliinka waxaana lagu aqoonsan yahay qaabkiisa jabsiga - xoogaa yar yar, oo jajab aan dhib lahayn. Dhacdadan, oo loo yaqaan "riyoon," ayaa si muuqata hoos u dhigaysa suuragalnimada dhaawaca dadka maadaama ay jiraan cidhibyo jaban ama faashad ballaaran.
Xamuulka Dabaysha iyo Difaaca
Muraayadaha Annealed Glass Muraayada kulul
Naqshad sameeyaha naqshadda lb / ft² Designwindxawaaraha mph (qiyaastii) Max Span @ Dabayl Wadad Difaaca Dhex-dhexaadka @ Max Max Span @ Dabayl Wadad Difaaca Dhex-dhexaadka @ Max
25 98 10,9 ′ 0.41 20.7 ′ 5,19 ″
30 108 10,0 ′ 0.34 ″ 18.9 ′ 4.32 ″
25 98 9,3 ′ 0.28 ″ 17.5 ′ 3.52 ″
Naqshadeynta naqshadda dabaysha lb / ft² Naqshadeynta xawaaraha dabaysha mph (qiyaastii) Max Span @ Dabayl Wadad Difaaca Dhex-dhexaadka @ Max Max Span @ Dabayl Wadad Difaaca Dhex-dhexaadka @ Max
45 133 10,9 ′ 0.38 ″ 21.4 ′ 5.82 ″
Hore: Nidaamka Jiilka Awoodda Dhalada ee Ulass Glass / U Channel Glass
Xiga: Jumbo / Muraayadaha Nabdoonaanta ee Quwada